Sirni Biltsiginnaa Magaalaa Maqaleetti haleellaa xiyyaaraa raawwate. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsSirni Biltsiginnaa Magaalaa Maqaleetti haleellaa xiyyaaraa raawwate.
Haleellaan Xiyyaaraa kun ganama har’aa naannoo sa’a 4:25tti raawwatamuu, maddeen oduu Tigiraayi ibsanii jiru.
Haleellaan kun raawwatamuu maddi Oduu Rooyiters hojjettoota gargaarsaa garas jiran irraa mirkaneeffadhe jedhe. Naannoon haleellaan kun itti raawwatame Ganda 05 jedhamuun kan beekamu ta’uufi, Warshaan Simmintoo naannichatti kan argamu ta’uu namoota wabeeffachuun gabaaseera.
Haleellaa raawwatame kanaan walqabatee balaan mudate jabaa ta’uu Viidiyoon gama miidiyaalee Tigiraayiin ifa tahe nimul’isa. Haleellaa raawwatameen walqabatee gabaasni miidhaa dhaqqabee yeroof ifa tahuu baatus, namoonni hedduun miidhamanii gara hospitaalaatti guuramaa turuun ibsameera.
Haleellaan kun walakkaa magaalaa bakka namoonni hedduun jiraataniifi sochiin hawaasaa jabaan jirutti kan raawwatame ta’uun miidhaa qaqqabe hammeessuu danda’a tilmaama jedhutu jira.
Sirni Abiy Ahimadiin hogganamu, guyyaa tokkoon duras achuma magaalaa Maqaleetti haleellaa xiyyaaraa yeroo lama raawwateen lubbuun daa’imman sadii darbuu, Dhaabbanni Mootummoota Gamtoomanii mirkaneesseera.
Bulchiinsi Abiy Ahimad duraan haleellaa kana raawwachuu haalee kan ture ta’us, turtii saatii muraasaa booda amanuuf dirqameera. Haleellaa ha’ra raawwatame ilaalchisuun garuu ammaaf deebiin kenne hin jiru.
Haleellaa xiyyaaraa irra deddeebiin raawwatamaa jiru kana ilaalchisuun xiinxaltoonni gochicha boqonnaa xumuraa sirna Dargiitiin walfakkeessaa jiru. Gocha abdii kutannaa waraanni Abiy Ahimad injifatamuu dirree lolaatti isa mudataa jiru hordofee dhufedha kan jedhanis jiru. Haleellaan xiyyaaraa lammiilee nagaa kan gaaga’u ta’uun walqabatee dhaabbileen idil addunyaas tarkaanfichi rifaasisaadha, lammiilee nagaa irratti fuulleffachuun haa dhaabbatu jechuu irratti argamu.
Magaalaa Dabra Birhaanitti Jiraattonni magaalaa paartiin አብን jedhamu Amaaraa bakka hin bu'u mootummaan tarkaanfii irratti…
Qeerroo magaalaa Hoolataa irraa....
Qeerroo magaalaa Hoolataa irraa.... via Girma Gutema